कुलमानकाे अवकासमा हाैसिएका बिचाैलियाहरु ! – Avenues Khabar
कुलमानकाे अवकासमा हाैसिएका बिचाैलियाहरु !
कुलमान हटाउ अभियानमा हात धाेएर लागिपरेका प्राधिकरण माफियाहरू जसरी भएपनि कुलमानकाे उज्यालाे अभियान समाप्त पार्न साउने ब्रत बसेका छन् । भदाैसँगै बिदा हुन लागेका कुलमान घिसिङ फेरि कार्यकारी हुने हुन् कि भन्ने चिन्ताले थला परेका बिचाैलियाहरू नारदकाे रूपधारण गरेर शक्ति केन्द्रकाे चक्कर काट्न थालिसके । वर्षमान देखि हर्षमान, बालुवाटारदेखि खुमलटारकाे दाैडमा खटिएका ‘ब्राेकर ब्राे’हरूकाे जमघट मेरिएट हाेटलकाे स्विटरूममा दिनहुँ हुने गरेकाे नागपाेखरीकै नागराजले वाचन गर्दै हिँडेका छन् ।
वर्षौंदेखि गाेदाममा थन्किएका जेनरेटर र इन्भर्टरकाे गाेदाम चार्जसमेत जाेडेर बसेका मारबाडी मित्रहरू दानदक्षिणाका लागि रकम संकलनमा खटिसकेका छन् । कुलमानकाे ठाउँमा आफ्नै चतुर्मानलाई बिराजमान गराएर असुलउपर गर्ने दाउमा खटिएका साहुमहाजनले ढुकुटी भरेकाे सूचना नारदमुनीले राजगद्दीकाे ढाेकेसामु चुहाएपछि र्‍याल चुहाउनेकाे ताँती लागेकाे खबर छ । उज्यालाे प्राधिकरणकाे चिर हरण गरेर अन्धकार निम्त्याउन उद्दत बिचाैलियाकाे हर्कत बीचैमा राेकेर आवाज बुलन्द नगर्ने हाे भने फेरि टुकी युगमा फर्कनुपर्ने पक्का पक्की गरिसके नारदमुनीहरूले । बुढी मर्ली भन्दानी काल पल्केला भन्ने उक्ति पनि फेल खाइसक्याे । किनभने काल पल्किसक्याे लगानी बाेर्डमार्फत् ।
भट्ट ब्रदर्सकाे ढुकुटीबाट बामदेवले राम्रै रकम झ्वाम पारे लाैन ठाेक्नु पर्‍यो भन्दै हस्याङ फस्याङ गर्दै आइपुगेका कमरेड मित्रले स्कुप छ आज भन्दै निम्ता गरे । कफिकाे चुस्किमा ह्विस्किकाे स्वाद लिँदै गफ्फिन थालेका कमरेडले ब्रेक नलगाई भन्न थाले । थाहा छ तपाईंलाई- बामदेव किन ओलीतिर लागे ? अहँ मलाई था छैन, मेराे बाेली झर्न नपाउँदै कमरेडले थपे “सुशील भट्टलाई बाेर्डमा लैजाने पक्का गर्नाेस्, म तपाईंकाे कित्तामा सुझावसहित उपस्थित हुन्छु । बामदेवले पिएमलाई फन्दामा पारेर नियुक्ति खाकाे हाे भट्टले अरू केही हाेइन ।”
यति क्लु छाडेर बेपत्ता भएका कमरेड हिजाे एकाबिहानै हाजीर हुन फेरि उपस्थित भए । नागपाेखरीकाे मेरिएट हाेटलमा हुने नारदमुनीहरूकाे पलपलकाे खबर टेपरेकर्डर जस्तै फररर वाचन गरिसकेपछि मलाई नै प्रश्न गरे, छैन त इन्ट्रेस्टिङ कुराे ? सत्य असत्य के हाे मलाई था भएन तर ती कमरेडले ठाेकुवा गर्दै भने “हेर्दै जानाेस् अब झलनाथ पनि ओलीकाे कित्तामा आएनन् भने म कान काट्छु ल ।” हावादारी गफ धेरै गर्न थाल्नु भएछ तपाईं, मात्रै के निस्केकाे थ्याे मेराे मुखबाट, भटटट कमरेडले धाराप्रवाह दिहाल्नुभाे ल सुन्नुस् “झलनाथकाे छाेराेलाई भैरहवा एयरपाेर्टकाे ठेक्का दिलाउने त्यै भट्ट हाे । झलनथाकाे कित्ताकाट गर्ने जिम्मा पनि उसैले लिएकाे छ । लेखराज भट्टदेखि टाेप बहादुरकाे खर्चबर्च सबै उसैले धानेकाे छ । वर्षमानले दायाँबायाँ गरे भने आफैं खुस्किन्छन् । भीम रावल उपप्रधानमन्त्री भए भने अचम्म नमान्नु हाेला ।” पुग्याे कि अरूनि खाेलाैं ? केरकारकै सैलीमा पाे प्रश्न गर्न थाले ती कमरेडले । झाेक देखाएर नि के गर्नु सुनिरनुकाे विकल्प थिएन मसँग ।
कमरेडका कुराले घाेत्लिन बाध्य बनायाे । याेगेश भट्टराईकाे क्रान्तिकारीता सम्झें, घनश्याम कमरेडकाे निष्ठा र आदर्शकाे राजनीतिमा विश्राम लागेकाे झलझलि याद आयाे, शक्ति बस्नेतकाे सर्बहारा नीतिले चेपाङलाई चेपुवामा पारेकाे घटना सेलाकाे छैन । जनार्दन र वर्षमानकाे बाध्यता अनि उता प्रजातन्त्रका मसिहा विश्वप्रकास शर्माकाे विश्वव्यापीकरणले बुढानिलकण्ठमा पुगेर लिएकाे विश्राम मथिंगल घुमाउन पर्याप्त थियाे, छ । के यी सबै नाैटंकी गणतन्त्रले दिएकाे उपलब्धि हाे ? आफैंले आफुलाई प्रश्न गर्न मन लाग्याे ।
कुराे ४२ सालकाे सत्याग्रहकाे हाे । हामी सत्याग्रही भद्रगाेल जेलमा बन्दी थियाैं । सुशील काेइरालादेखि कृष्णराज बर्मासम्म, प्रकाशमानदेखि गाेपालमानसम्मकाे कांग्रेसी भीडभाड थियाे जेलभित्र । एकदिन पिपलबाेटमा (जेलभित्रकाे चाैताराे) गाईं गुईं सुनियाे जेलभित्र सीआईडी छिराकाे छ रे । त्याे पत्रकार पनि हाे रे । पञ्चायतकाे हण्डीमा पालित पाेसितहरूकाे एउटै काम हुन्थ्याे पंनिजाबुस (पञ्चायत नीति तथा जाँचबुज समिति)ले अराएकाे काम नाककाे चालले गर्ने । सत्याग्रहीकाे रूपधारण गरेर जेल छिरेका ती पात्रकाे काम जेलभित्र बसेका सत्याग्रहीले पञ्चायतविरुद्ध के कस्ता कुराकानी गर्छन् ? बुझेर सुलसुले शैलीमा जेलरमार्फत हण्डी केन्द्रसम्म पुर्‍याउने । सत्ता जाेगाउन पञ्चहरूले कुनै कसुर बाँकी राखेनन् । ती बयाेबृद्ध सुलसुले पत्रकारले पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म सर्लक्कै निले । सिपालु शासकले शासन गर्ने शैली आफैं तय गरेका हुन्छन् र उनीहरू त्यै शैली नै सर्वेसर्वा हाे भन्नेमा ढुक्क हुन्छन् ।
महेन्द्रकाे विरासत वीरेन्द्रले सुलसुले बिचाैलियाकै भरमा टिकाएका थिए । कर्मचारीदेखि पत्रकार, डक्टरदेखि कलाकार राजदरवारकाे वरिपरि घुमेरै राजावादी भै टाेपलेका थिए त्यतिखेर । राजतन्त्र धरापमा परेपछि नैतिकता देखाउने हिम्मत कुनै माइकालालले गर्न सकेनन् । राजतन्त्र हटाउने निर्णय सुनेर बसेका रूक्माङ्गतदेखि सूर्यबहादुर, कमल थापादेखि रमेशनाथ पाण्डे कसैलाई पनि राजसंस्थाकाे आवश्यकता परेन । खाएकै थालमा फाेहाेर गरेर कुलेलम ठाेकेका पूर्व पञ्च भनिनेहरू गणतन्त्रमा खिया लागेपछि फेरि महाराजधिराजकाे जाे हुकुम भनेर सलबलाउन थालेकाे प्रसंग राजपाठ बुझेका बचाैलियाहरूले गर्न थालेका छन् । शासकलाई गद्दि भए पुग्ने शासन कु हाेस् वा शु हाेस् ! बिचाैलियाकाे भरमा सत्तामा विराजमान भैरहने सपना निन्द्रामा मात्रै सुन्दर लाग्छ विपनामा हाेइन भन्नेसम्मकाे हेक्का नराख्नेलाई के नै उपदेश दिन सकिन्छ र ।
ठेक्कापट्टा र नियुक्तिका फाइल च्यापेर शक्तिकेन्द्र धाउने बिचाैलियाकाे जगजगी, फाेहाेर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्ताे भैसक्याे । कुलमान अवकासकाे पूर्वसन्ध्यामा प्राधिकरण क्याप्चर गरेर धनपति बन्ने पिपासु बिचाैलियाहरूकाे मकसद पूरा नहाेस् भन्नेतर्फ सचेत गराउन ढिला गर्न हुन्न । अन्धकार युगकाे अन्त्य गरेर जन जनकाे ढुकढुकी बनेका कुलमानकाे प्राधिकरण बसाईकाे दिनगन्ति शुरू भएसँगै आफु अनुकुलकाे मान्छे भित्र्याउने हाेडबाजी नै चलेकाे छ । प्राधिकरणलाई हाम्राे मान्छे हाेइन कुलमान जस्तै राम्राे मान्छे चाहिएकाे छ ।
(लेखक कोइराला एभिन्यूज खबरका खबर प्रमुख हुन् ।)
विराटनगरमा ३ पत्रकारसहित २२ जनामा कोरोना संक्रमण
आज दिनभर पानी पर्ने सम्भावना
३ माघ २०७६, शुक्रबार ०८:३६
काठमाडौं : पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका…
अमेरिकी संसद भवनमा भएको हिंसामा मुत्यु हुनेको संख्या ५ पुग्यो
२४ पुष २०७७, शुक्रबार १२:१३
एजेन्सी : अमेरिकी संसद भवनमा भएको हिंसामा…
वीरगञ्ज–१५ लक्ष्मणवास्थित हनुमान प्याकेजिङमा आगलागी
२६ कार्तिक २०७७, बुधबार २०:३४
वीरगञ्ज–१५ लक्ष्मणवास्थित हनुमान प्याकेजिङमा…
चीनमा देखिएको रहस्यमय भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरुको संख्या बढ्दै
४ माघ २०७६, शनिबार १०:२७
चीन : चीनमा देखिएको रहस्यमय भाइरसबाट संक्रमित…
१७ चैत्र २०७६, सोमबार १०:२६
काठमाडौँ : कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय…
१२५५ कोरोना संक्रमित थपिए, थप २५ को मृत्यु
१४ मंसिर २०७७, आईतवार १६:२२
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा…
घमेश दुलालकाे ‘बनमा खयर’ सार्वजनिक
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १८:१९
काठमाडौं : लाेक दाेहाेरी क्षेत्रमा एक…
शहीदगेटमा लम्पसार परेर प्रदर्शन : ‘बेसार प्यार प्यार, काम कहिले सरकार ?’
६ असार २०७७, शनिबार १३:४१
पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्सको विमान कराँचीमा दुर्घटना
पाकिस्तान अन्तरर्राष्ट्र«य एयरलाइन्स (पीआईए) को ए थ्री ट्वान्टी को एयरबस शुक्रबार कराँचीस्थित जिन्नाह…
रोनाल्डो ग्लोब सकर अवार्ड अन्तर्गत ‘शताब्दीका खेलाडी’ घोषित
एजेन्सी। पोर्चुगलका फुटवल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ग्लोब सकर अवार्ड अन्तर्गत ‘शताब्दीका खेलाडी’…
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड बढेपछि नागरिकता लिन सर्वसाधरणलाई सास्ती
कपिलबस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सर्वसाधारणलाई सास्ती बढेको छ । सरकारले…
बिक्रीमा शेरबहादुर !
केदार कोइराला मानव सभ्यताकाे व्याख्या अबकाे ब्रम्हाण्डले कसरी गर्छ त्याे त थाहा भएन । तर एउटा सत्य…
मुकेश अम्बानीको छोरा अकासलाइ पुत्र लाभ
एजेन्सी । भारतका धनाढ्य उधोगपति मुकेश अम्बानी र निता अम्बानीका छोरा अकास अम्बानी र बुहारी स्लोका मेहतालाइ…
अधिवक्ताको मानमर्दन गरेकाले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बारका चार पूर्वअध्यक्षहरुको भनाइ
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बरिष्ठ अधिवक्ता ९५ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारीको मानमर्दन…